Faroole “Annaga iyo Federaalka Dastuurka Ayaan iskula Mehersaneyn Haddii Dastuurkii Ladiidayna Waan Kala Tagnay |
Faroole “Annaga iyo Federaalka Dastuurka Ayaan iskula Mehersaneyn Haddii Dastuurkii Ladiidayna Waan Kala Tagnay
Hoggaamiyaha maamulka Puntland Cabdi Raxmaan Faroole ayaa jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo ku aadan xaaladda Soomaaliya ka aloosan.
Faroole oo ka qeyb gelayay munaasabad loogu dabaal degay aas-aasiddii maamulka Puntland ayaa weerar dhanka Afka ah ku qaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saacid Shirdoon.
Wuxuu sheegay in dhammaan heshiisyadii ay wada saxiixdeen Puntland iyo DF-ka ay naqdeen kuwa fashilmay oo waxba aysan kasoo naasa caddaan “Haba yaratee wax ka dhaqangalay heshiiskii aan Federaalka lagalnay majiro waxaan ogeyn Saacid Shirdoon oo Garowe warqado ka qaaday malaha waxaan filayaa in Xasan Sheekh Gubay warqadihii Heshiiska markii Villa Somalia loogu geeyay”ayuu yiri Faroole.
Hoggaamiyaha maamulka Garowe wuxuu u muuqday mid qabweynin u muujinayay DF-ka ee taakta daran isagoo si jees jees leh ula hadlayay Xasan Sheekh islamarkaana u muujinayay in maamulkiisu uusan u baahnayn DF-ka.
Halkan ka dhageyso qudbadiii Faroole
“Wax xiriir ah oo naga dhaxeynaya majiraan,wuxuu u ahaanayaa Dastuur dawlad-goboleedka Xamar ay leedahay maahan key hada haystaan kii Soomaaliya maahan, Wey u haysan karaaan hadey dawlad-goboleed Xamar dastuurkaas ku dhaqmaan laakiin mid Soomaaliyeed ma ahaanayo”Faroole.
Shirka Biljamka ka dhacaya Puntland Marti ugama ahan Xasan Sheekh!!.
Cabdi Raxmaan Faroole wuxuu soo hadal qaaday shirka ay Midowga Yurub ku doonayaan in ay ku xalaalaystaan dhaqaalaha dalka Soomaaliya wuxuuna sheegay in shirkaasi iyaga si gaar ah loogu casumay oo aysan jirin cid ku metelayso.
Wuxuu si kulul u wareeray Afhayeenka Villa Somalia oo maalmo ka hor sheegay in DF-ka ay kaligeed shirka ku metelayso dhammaan maamulada dalka kajira hadalkaasi oo uu Faroole ku tilmaamay mid aan jirin.
“ Anagoo State-s ah oo aan cidi noo hadleyn anagu aan wadano waxayaga qorshahayaga shanta sano waxa ku qoran ayaan la tageynaa anagaa hadleyna cid noo hadleysa majirto hadeysan taas ahayn matageyn”ayuu yiri Faroole.
Qabyaaladeysi iyo isla qabweynin uu Faroole ka digay.
Faroole ayaa si islaweynin ku dheehanyahay ula hadlay Xasan Sheekh oo uu umuuqday in ay is faceysanayaan wuxuuna yiri “Ciddii cid u baahan waa la arki doonaa”,safiirada loo magacaabay wadamada Bariga Afrika ayuu sheegay in ay yihiin kuwo liddi ku ah Puntland islamarkaana huwan shaati qabiil.
“Safiirada wadamada dariska loo magacaabay waa kuwa liddi ku ah Puntland sida Itoobiya oo Nin diidan jiritaanka Puntland loo dhiibay safiirkii Puntland udhashayna lagasoo eryay,waxaa kale oo labedelay safiirkii Suudaan oo reer Puntland ahaa”Faroole.
Wuxuu soo hadal qaaday deeqaha waxbarasho ee DF-ka dibadda ka hesho wuxuuna ka dhawaajiyay in hadda kadib aanay Muqdisho u doonan doonin saxiixa deeqaha waxbarashada dibadda.
“Maryan Qaasim baa tiri Muqdisho imaada oo saxiixa deeqaha waxbarasho usoo doonta oo maxay anaga namoodeen hadda kadib Puntland Muqdisho saxiix u aadi mayso iyadaa ismaamulaysa”.
Faroole oo Been ka Sheegay Qur’aanka Malaa’ikta Ilaaheyna ku jeesjeesay.
Cabdi Raxmaan Faroole oo lagu tiriyo mid kamida dagaal oogayaasha ugu dhaqanka xun Soomaaliya ayaa ka been sheegay diinta islaamka isagoo si khaldan oo isdaba marin ah u akhriyay aayadda 10-aad Suuratu Racad macnaha aayadda ayuu daba gediyay boos aysan laheyna waa dhigay.
Sidoo kale Faroole wuxuu ku jeesjeesay Malaa’ikta Allaah mar uu hadlayay wuxuu yiri “Ciddii cid u baahan hala arko baahi aysan iyagu noo qabin annagu uma qabno,halkayagan kala joogaynaa sidaasi oo ay tahay ma ahan ma aqaan in Malaa’ik loosoo dirayo oo ay hanuuninayso Federaalka”!!.
Faroole wuxuu muujiyay suurtagalnimada in malaa’ik loosoo dirayo Xasan Sheekh iyo Saacid Shirdoon oo ay Malaa’iktu ku hanuuniso in ay isaga la heshiiyaan subxanallaah waa beenaale beentiisu caddahay.